Prototyping Rapid - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Anebon ondle kuphela iinkonzo wena wemveliso umthamo ophantsi lweemveliso, kuqwalaselwa uyilo ezintsha mveliso, kodwa kwakhona ukunika iinkonzo proto processing ngokukhawuleza. Ukuba une iiprojekthi ezintsha phantsi uphuhliso, singakwazi ukubonelela iimbekiselo ukhetho eziphathekayo, iinkqubo machining kunye nonyango komhlaba. Kunye nezinye iziphakamiso, Yenza uyilo lwakho practical ngakumbi, eqonda nobuchule bakho ngokwezoqoqosho ngokukhawuleza.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba Rapid Manufacturing yahlukile prototyping, kuba ifuna iqondo eliphezulu ingqalelo umgangatho, repeatability, kunye neemfuno engqongqo ngakumbi izicelo zemveliso. Kule nkalo Anebon yenye ezimbalwa kushishino leyo ngumvelisi lokwenyaniso olukhawulezileyo.
Thina ukugxininisa kwimveliso ezikumgangatho ophezulu, AMAGQABAZA ▸ zexabiso eliphantsi. Uluhlu lobugcisa kunye neenkonzo, thina ogqibeleleyo olunye-stop-shop zonke iimfuno zakho prototyping.
AMAGQABAZA ▸ ziluncedo kakhulu ukuphucula uyilo, yaye uninzi abathengi bethu kufuneka ngokukhawuleza ukuvelisa amalungu omzimba ukuqinisekisa uyilo okanye ukufumana amathuba intengiso elifutshane-term.
iindawo ezininzi eziveliswa ezivenkileni proto kule mihla zifuna ezintlanu-kabini machining, umama kunye machining iinkonzo-axis 5 eziphezulu-kwemfuno kwizicelo ezahlukeneyo kuluhlu olubanzi mveliso kubandakanywa ishishini aerospace, ishishini umkhumbi, imoto refitting kwakunye namandla mveliso amashishini imveliso. iinzuzo Machining ziquka umphezulu wokugqiba eliphezulu-umgangatho, ukubeka ukuchaneka, kwaye elifutshane ixesha ikhokelela ngexesha lofundo edge kakhulu amathuba oshishino amatsha.
Kutheni ukhetha Anebon for prototyping ngokukhawuleza?
Fast Delivery: proto ngokukhawuleza iintsuku 1-7 unikezelo jikelele, umthamo libya processing imveliso iintsuku 3-15 uhanjiso lwehlabathi;
iindawo ezikhupha , aluminiyam kufa uphose , zinc izitho ukulahlwa kufa, aluminium ukulahlwa, izahlulo eyahlulayo kufa , izahlulo aluminiyam zifa bephosa ;